चितवनको शैक्षिक परामर्शमा अनर्स सधै अब्बल: कँडेल - Narayanionline.com
गोपालप्रसाद कँडेल चितवनको शैक्षिक परामर्शको क्षेत्रमा परिचित नाम हो । आजभन्दा ४० वर्षअघि भरतपुर महानगरपालिका–४ यज्ञपुरीमा जन्मिएका उनी आफ्नो अध्ययन पूरा गरेपछि विगत १५ वर्षदेखि शैक्षिक परामर्श पेसामा आवद्ध छन् । नारायणगढको शहिदचोकनजिकै गणेश हल मार्गमा रहेको अनर्स एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको उनी संस्थापक तथा कार्यकारी अध्यक्षसमेत हुन् । यसअघि कँडेलले एम्स एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको कार्यकारी अध्यक्ष, एजुकेसन प्लानेट चितवनको निर्देशक, क्यानेडियन एजुकेसन कन्सल्टेन्सी काठमाडौँ कमलादीमा परामर्शदाता, नेपाल एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी काठमाडौँको कार्यकारी निर्देशक र भृकुटी इन्टरनेनशनल एजुकेसन डिल्लीबजारमा प्रवन्ध निर्देशकको भूमिका निभाइसकेका छन् । उनको आधा दर्जन कन्सल्टेन्सी सञ्चालनको अनुभवले नै शैक्षिक परामर्शको क्षेत्रमा रहेको अब्बल क्षमतालाई प्रस्फुटित गर्छ । जीवनको उर्वर समय उनले शिक्षा र शैक्षिक परामर्शको चिन्तनमा नै बिताएका छन् । कहिलेकाहीँ व्यवसायबाट फुर्सद मिलेमा कँडेलले गीतसंगीत सुन्न र नृत्य गर्न विशेष रुचि राख्छन् ।
चितवनका विद्यार्थीलाई आफ्नै खर्चमा विदेश पढ्न पठाउने मात्र भन्दा पनि छात्रवृत्तिहरुको व्यवस्था मिलाएर विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने काममा उनी अग्रसर छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेका उनले बेलायतमा एक वर्ष अध्ययन गरेका छन् । विश्वका विभिन्न देशका विश्वविद्यालय र शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा भाग लिएर चितवनलाई नै कर्मथलो बनाइरहेका कँडेलसँग नारायणी अनलाइनले व्यवसायिक वार्ता गरेको छ । प्रस्तुत छ सोही वार्ताको सम्पादित अंश :
प्रश्न : अनर्स एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको मुख्य उद्देश्य के हो ?
जवाफ : विद्यार्थीले पढ्न विदेश जाँदा कुनै न कुनै छात्रवृत्ति पाऊन् भन्ने उद्देश्यले नै यस कन्सल्टेन्सीको स्थापना गरिएको हो । अष्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानडा र अमेरिकामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने कार्यमा हामीले काम गरिरहेका छौं ।
प्रश्न: चितवनमा धेरै कन्सल्टेन्सीको भीडमा अनर्स के फरक छ ?
जवाफ : शैक्षिक परामर्श भनेको अनुसन्धान गरेर जानकारी दिने विषय हो । मेरो सम्पूर्ण अनुभव र सिप यसै कन्सल्टेन्सीमा खर्च गरिरहेको छु । सन् २०१९ मेमा अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा भएको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो शैक्षिक सम्मेलनमा मैले भाग लिइसकेको छु । त्यसैगरी मैले अष्ट्रेलियाको क्वालिटी एजुकेसन ऐजन्ट काउन्सिलर(क्यूईएसी)को आधिकारिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छु ।
म आफैँ पनि शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीको सर्टिफाइट काउन्सिलर हो । अष्ट्रेलियाको पटक पटक भ्रमण गरेर त्यहाँको शिक्षा प्रणाली र विश्वविद्यालयहरुको प्रत्यक्ष अध्ययन गर्ने अवसर पाएको छु । मेरो टिममा बेलायतबाट मास्टर्स डिग्री पूरा गरेर १० वर्ष बेलायतमा बसेर आउनु भएको कृष्ण भुसाल हनुहुन्छ । तसर्थ हामी गुणात्मक शिक्षा र परामर्शको लागि अन्य कन्सल्टेन्सीभन्दा अब्बल छौं ।
प्रश्न: आजसम्म कति विद्यार्थी बाहिर पठाउनुभयो ?
जवाफ : धेरै विद्यार्थी पठाएको छु । सबै नै छात्रवृत्तिमा बाहिर देश गएका छन् । छात्रवृत्ति पाइँदैन भनेर हरेस खाएका विद्यार्थीहरु पनि खुसी भएर मेरो कन्सल्टेन्सीबाट पढ्न बाहिर गएका छन् ।
प्रश्न : शैक्षिक परामर्शको क्षेत्रमा यति धेरै वर्ष काम गर्नुभयो ? कस्तो अनुभव भएको छ ?
जवाफ: सुरु सुरुमा शैक्षिक परामर्शको काम गर्दा मानिसहरुले नबुझेर मेनपावर खोलेर बसेको जस्तो अनुभव हुन्थ्यो । पढ्नलाई छात्रवृत्ति पाइन्छ भन्ने पनि धेरैलाई थाहा थिएन । अध्ययन राम्रो र आईएलटीएसमा राम्रो स्कोर लिएको जो कोही विद्यार्थी छात्रवृत्तिको लागि योग्य हुन्छ । अष्ट्रेलियामा विद्यार्थीले अमेरिकामा भन्दा धेरै काम गर्न पाउँछ ।
अमेरिका र अष्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति दिने परिपाटी केही फरक छ । प्राय मास्टर्स तहमा अध्ययन गर्न जानेलाई अझ राम्रो छ । मास्टर्स दुई वर्षमा सकिने र विद्यार्थी पनि केही परिपक्क हुने भएकोले धेरै सजिलो हुन्छ ।
प्रश्न : तपाइँको कन्सल्टेन्सीका अन्य विशेषताहरु के के छन् ?
जवाफ: हामीले आईएलटीएसको कक्षा सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण पूर्वाधारहरु हामीसँग उपलब्ध छन् । हामीसँग अहिले पार्टटाइम आईएलटीएस प्रशिक्षक भने हुनुहुन्छ । हामी आईएलटीएस पढाउने भन्दा पनि काउन्सिलिङमा नै केन्द्रिैत छौं । प्रोजेक्टर, सीसीटीभी र एसीसहितका कक्षाहरु हामीसँग उपलब्ध छन् । हामी वैदेशिक उच्च शिक्षाको लागि अन्य कन्सल्टेन्सीहरु भन्दा अब्बल नै छौं । मेरो जीवन दर्शन नै असफलता नै सफलताको संकेत हो भन्ने रहेको छ । त्यसैले म विद्यार्थीहरुलाई एकपटकको असफलताबाट नआत्तिन अनुरोध गर्दछु ।
2 प्रतिक्रिया on “चितवनको शैक्षिक परामर्शमा अनर्स सधै अब्बल: कँडेल”
Best Consultancy in Chitwan. Especially UK, Australia, Canada and USA.
मौसमका कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वागत गर्न नपाउदा खिन्न भए स्थानीय जनता
चितवनमा निर्माणाधिन रंगशालालाई पैसा जुटाउन सेलेव्रिटीले क्रिकेट खेल्ने
बागलुङ जिल्ला सदरमुकामस्थित कपास उद्योगमा आगलागी